Sidee loo doortaa mashiinka saxda ah ee hepa filterka hawada, mashiinka bacda filterka jeebka? -Shacabka News-Shanghai Sffiltech Co., Ltd.
Sidee loo doortaa mashiinka saxda ah ee hepa filterka hawada, mashiinka bacda filterka jeebka?
Waqtiga: 2019-05-17 Hits: 34
1. joogsiga koowaad waa hangzhou, waaw, warshaddu waxay umuuqataa mid wanaagsan, mashiinno farabadan oo hoosyimaada diyaarinta, warshada ma weyna, laakiin waa caadi, shaqaalaha halkaas jooga oo shaqada qabanaya. Markaas macmiilku wuxuu weydiiyaa su'aasha koowaad:
1. waxaan rabnaa inaan tijaabino makiinadan? Waxaan arkay mashiinno miiraha hawada aad u tiro badan, laakiin inta badan loogu talagalay sameynta shaandhada hawada gaariga, oo aan diirada la saarin sameynta shaandhada hepa, waxaan dooneynaa inaan aragno mashiinka shaandhada hawada hepa saxda ah ee socda. Laakiin waxyeello badan oo ka mid ah mashiinka mashiinka keena ee Shiinaha ma lahan mashiinnada noocaas ah. Markaa macaamilku wuxuu dareemayaa niyad jab aad u weyn, taasi ma ahan jidka, wuxuu rabaa inuu kaliya doonayo inuu arko mashiinka shaqeynaya.
Intaas ka dib, waxaan ku iri macmiilkeyga oo waxaan ku idhi, ok, waxaan kuu keenay warshaddayda si aad u eegto dhammaan shaandhaynta shaandhaynta xaaladda, markaa waad wada ogaan doontaa.
Ka dib 2 saacadood oo kale oo baabuur wadista, ka dib waxaan ku jirnaa warshadda mar hore.
Wow, waxaan arkaa in macaamilka uu dareemayo wanaag aad u wanaagsan, wax walbana si faahfaahsan u hubi. Warshaddeenu waxay leedahay mashiinno jilicsan, mashiinnada miiraha jeebka, mashiinnada kormeerka iyo sidaas wiil. Wuxuu dareemayaa mashiinka saxda ah ee hore.
Kadib wuxuu igu yiri, waa wadada saxda ah ee aan ku doorto mashiinka.
Kadib waxaan taxaa dhamaan mashiinka uu ubaahan yahay, wuxuu i weydiiyay PI iyo waqtiga dhalmada.
Kadib safarkii wuu dhammaaday, macaamilku waa faraxsan yahay waana faraxsanahay.
Xilliga xagaaga, mashiinka, warshadda wax soo saarku waa habka saxda ah ee macaamilku u dooran karo, oo uusan u keenin soo saaraha mashiinka, badiyaa waxay luminayaan waqtiga :).
Waad ku mahadsan tahay akhriskaaga, ku soo dhawow degelkeenna: www.airfiltech.com
Waxaa jira alaab-qeybiyeyaal badan oo Shiinaha ku jira oo loogu talagalay mashiinka sameynta shaandhada hawada.
NEXTSidee Loogu Xulaa Filterka Si Sax Ah?